Baahin: Axad, Sept 04, Weriye Xalima Sacdiya ~ Daljir ~ Garowe. Shirkii wadatashiga Somalida oo Muqdisho ka furmay; khudbadihii madaxda Somalida; Issimada gobolka Mudug oo shir ka yeeshay colaada Galkacyo; xabab joojin lagaga dhaqaaqay Galkacyo; M/weyne Faroole oo ku eedeeyey Galmudug in ay taakulayso kooxaha argagixisada. – Radio Daljir
Baahin: Axad, Sept 04, Weriye Xalima Sacdiya ~ Daljir ~ Garowe. Shirkii wadatashiga Somalida oo Muqdisho ka furmay; khudbadihii madaxda Somalida; Issimada gobolka Mudug oo shir ka yeeshay colaada Galkacyo; xabab joojin lagaga dhaqaaqay Galkacyo; M/weyne Faroole oo ku eedeeyey Galmudug in ay taakulayso kooxaha argagixisada.
Seteembar 4, 2011 12:00 b 0
War saxaafadeed: Soo-bandhigidda Maxaabiistii Lagu Qabtay Hawlgaladii iyo Dagaalkii magaalada Galkacyo.
Ardayda Puntland ee dalka China oo baaq xabad joojin ah ka soo saaray colaada Galkacyo.